Kuongorora kwemwedzi | Kubva kuLinux
Isu takaburitsa mhedzisiro yeongororo yemwedzi wapfuura: ndeipi yakanakisa distro? Uye isu tinovhura iwo mutsva mubvunzo wemwedzi: Ndeipi yakanyanya kunaka bittorrent mutengi we linux? Kuvhota kwataurwa!
1 Mhedzisiro yeongororo yapfuura
2 Ongororo nyowani yemwedzi uno
Mhedzisiro yeongororo yapfuura
Ubuntu: 816 mavhoti (50.34%)
Linux mint: 215 mavhoti (13.26%)
Arch: 163 mavhoti (10.06%)
Debian: 113 mavhoti (6.97%)
chuck: 81 mavhoti (5%)
Fedora: 75 mavhoti (4.63%)
Zvimwe: 66 mavhoti (4.07%)
OpenSUSE: 51 mavhoti (3.15%)
Puppy linux: 20 mavhoti (1.23%)
sabayon: 12 mavhoti (0.74%)
PC Linux OS: 9 mavhoti (0.56%)
Zvinoshamisa kuti Ubuntu + Mint + Debian yakawana dzinoda kusvika 70% yemavhoti. Panzvimbo yechitatu yakakodzera pane Arch, ichisiya Fedora naMandriva kumashure kumashure. Mhedzisiro inofadza. Unofungei?
Ongororo nyowani yemwedzi uno
Mutengi akanyanya kunaka nde ...Market Research
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Ongororo yemwedzi
Ndatenda!!!!! Ini ndichaedza kusanyanya kureba !!
hanzvadzi sikana akadaro
Ubuntu ine mukurumbira kwazvo, uye kana ukazvijairira uye uchida kuchinja, iwe unogona kuchinjira kuMint kana Debian. Ndiri kufunga kuyedza Svina uye LMDE kuitira ramangwana rekutama, nezuro ndakaedza Fedora uye yangu yekutanga pfungwa ndeyekuti ndinosarudza Ubuntu. Mandriva, Arch uye OpenSuse zvakare ari muzvirongwa zvangu, kuwedzera kuna Pardus. VirtualBox iri kuenda kunoputa!
Pindura kuna rsister
Ini ndinokurudzira debian, kuti kunyangwe iine mapakeji zvishoma zvishoma kumashure, kudzikama kunonzwika, sezvo izvo zvinhu zvisinganzwisisike zvinoitika kwauri muUbuntu zvinomira kuitika kwauri nekuti kana xD
Ini ndinoshandisa kuyedza neyemultimedia repos uye ndiri benzi, hapana dambudziko.
Arch yakaiyedza uye yakanaka kwazvo, asi zvinotora nguva yakawanda kuti iigadzirire
Inokodzera nzvimbo yechinomwe ye «Zvimwe», hapana munhu anoti chero chinhu? 😛
Ini handizive nezvako, asi zvaive zvimwe chokwadi kuti mhedzisiro yacho ingave yakanyanya kana kushoma iwo, kunyangwe iwo mubvunzo chaiwo weongororo "inova ndiyo distro yepamusoro" yakabvunza chimwe chinhu. Unonzwisisa zvandiri kuenda here? Zvinoita sekuti vakapindura inova inonyanya kufarirwa….
Zvakanaka, ndinogona kukuudza kuti Ubuntu yakakundwa zvakanyanya, zvirinani mune yangu ruzivo Ubuntu inoshanda zvinoshamisa, haina kupunzika (yakakwira kwazvo nhanho yekusimudzira yakasvikwa kubvira vhezheni 10.04), kuisa kunyorera kuri nyore kupfuura nakare kose, madhiraivha shanda 100% uye rutsigiro rwakakura kubva munharaunda rwunoita kuti hupenyu huve nyore. Muna 2010 ndakapa Mandriva, OpenSUSE uye Ubuntu uye ndinoramba ndakanamatira neUbuntu. Asi zvinoenderana nerudzi rwevashandisi kana Mandriva kana Debian akakushandira zvirinani, ipapo ndiko kuchave kugovera kwakanyanya mumaonero ako. Chinhu chakakosha ndechekuti isu tese tinoshandisa Linux, isu tinofanirwa kudada nayo. Mufaro!!
PS Ndine hurombo nekushayikwa kwemataurirwo asi ini ndinonyora kubva pamhando uye inongova neChirungu keyboard.
Zvirokwazvo. Maitiro ekutsanangura akanakisa distro akawanda. Zvinenge zvakafanira kuongorora zvinhu zvakawanda kudaro, nekuti izvi zvinoda kudzidza zvakadzama zvekuti ongororo yakapusa haigone kuvhara. Asi zvakanaka kana pfungwa yako yakanzwisiswa. Nenzira, mumaonero ako, ndeipi distro yakanyanya kunaka? Kana iyo inoshanda zvakanyanya kwauri iwe muzuva rako zuva nezuva?
Tarisa, kuti zvive nyore ini ndinoshandisa Ubuntu, ini ndakatanga angangoita makore gumi apfuura neSlackware uye ini ndakanyatso kudzidza mashandiro eOS (tsvaga ruzivo kubva kuSlack uye iwe uchazoziva kuti sei ndichikuudza) neiyi distro.
Ipapo ini ndine webserver / mailserver yakagadzirwa paDebian uye inoshanda kwazvo paPentium II.
Izvo zvakare zvinoenderana nekushandisa kunopihwa kuchinhu chimwe nechimwe, kumakambani hapana chakaita senge redhat yandinofunga….
Unoziva here kuti iwo musoro wenyaya chii? Ini ndinofunga kuti ne ubuntu haudzidze linux pachayo, iwe unodzidza ubuntu… .zeze ukasvika kumisikidza maseva uye zvinhu ne said distro. Neslackware ndakadzidza kuti kana ndaida kuve nechikumbiro, ndaifanira kuibatanidza, tsvaga kutsamira nezvimwe ... ndinoreva, ndakadzidza Gnu / linux.
Mazuva ano ndinogona kuzviita ne debian, ubuntu uye chero imwe distro ... nekuti ini ndinofunga ndakadzidza Gnu / linux ... ubuntu inounza vanhu padhuze neGNu / linux, asi mumaonero angu haina kuvadzidzisa Gnu / Linux.
Tarisa uone zvataurwa pandiri. http://usemoslinux.blogspot.com/2011/02/como-usar-siempre-la-ultima-version.html uye iwe uchaona nei ndichiti vanhu vanodzidza ubuntu kwete Linux
Zvinotaridza kunge hazvishamise kwandiri. Zviri pachena.
Arch yakanaka kwazvo asi yanonoka kumisikidza zvese nemaoko uye iyo inodzosera vashandisi kwazviri.
EÄRENDIL, ndakatumira chirevo chakareba uye hachina kuburitswa, chiri chikonzero here?
kutenda nekumbundira !!!
Alex hapana akataura neimwe nzira, hongu iwe sarudza iyo distro yaunonzwa kugadzikana nayo, asi nekuti ndiyo yakasununguka hazvireve kuti ndiyo yakanakisa.
Tarisa paWindows Window, zvese zvinotevera, zvinotevera uye unazvo zvichishanda uye zvinosuwisa kuti ndiyo inonyanya kufarirwa OS, nei? kuitira nyore ... kwete nekuti zvirinani uye tese tinoziva kuti ...
Pfungwa yangu inonzwisiswa here? Ndinofunga izvozvi kana ndichifanira kunzwisisa
Zvakanaka, ndakawedzera kuumbiridza, kutsvaga kutsamira uye kuporesa zviri kuitika kuseri kwemahwindo eUbuntu hwangu, uye ndakazvidzidza ipapo. Ini ndinonzwisisa kuti neimwe nzira iyo distro inoita kuti vanhu vave nehusimbe asi vanditende, zvinoenderana zvakanyanya nekukurudzira kwemunhu wega kudzidza pane pane distro yavanoshandisa. Izvozvi zvaunotaura nezve slackware ini ndichazviedza nekuti ini ndoda kuyedza zvinhu zvitsva.
Ndatenda kubatana. Ndinozoiverenga munguva pfupi. Kwazisai!
Shamwari ini ndinofunga kuti zvatinobvumirana tese ndezvekuti iyo console kana terminal nemagwaro ayo akafanana nhetembo dzeGNU / Linux masystem
Mario Fajardo, sei iwe usati wanzwa nezveLinux Mint?
Ini ndinokoka vese Ubunteros kuyedza Linux Mint kwemazuva mashoma !!!
Iyo mukaka, kana iwo mubvunzo wanga uri wedistro yaunoshandisa, zvakanaka, asi 50% vanoti iyo yakanakisa distro ndiUbuntu, zviri pachena kuti havana kuyedza futi. Ini ndashandisa Ubuntu (nguva yakareba), Slackware, Debian, uye Arch.
Izvozvi ndiri kugara naArch ndisingazeze.
Pindura kune nyoka
Ndiri kuyedza Arch uye ndinonyatsoifarira ...
Handirambe chokwadi chekuti dzimwe nguva zvimwe zvinhu hazvishande zvachose. Ini ndaive nematambudziko neangu isina waya netiweki kadhi mune dzekare shanduro dzeUbuntu, asi timu yekusimudzira inoshanda nesimba kugadzirisa zvinhu izvi, saka nhasi ndinogona kukuudza kuti zvese zviri pasi peUbuntu zvinondishandira 100% kwandiri. mapakeji aunobvisa haana kunetsa zvakadaro pane zvakawanda zvinyorwa pamusoro pazvo. Ini, semuenzaniso, handifarire shanduko uye ini ndinogara ndichiipa iyo "Sudo purge" ndobva ndaitsiva neye thunderbird. Iwe unofanirwa kumisazve "gomba" rasara asi zviri nyore kuwana rubatsiro. Nezve zvinotevera, pedzisa. Kunyange izvi zvichiuya nechakanaka chekuita kuti hupenyu huve nyore kune newbies, kuchine koni kune avo vedu vanofarira kutaipa Izvi zvinotevera sarudzo chete kune avo vanoda kuishandisa, usashandise kana usingaifarire.
Asi isu tichagara tichiwira kuchinhu chimwe chete, ndiyo nzira yekuda inoreva mota kana otomatiki, imwe neimwe inosarudza yavanoda zvakanyanya. Mufaro!!
Chandinonyunyuta nezvacho ndechekuti iyo koni yakavanzwa zvishoma nguva dzese, apo painenge isingafanire kudaro, mukuwedzera pachena musoro wenyaya ye Inotevera, Gamuchira, Pedza. Uye nekufamba kwemakore, Ubuntu wakandipa mamwe matambudziko, uye ini ndakazopedzisira ndotarisa kune imwe nzira, chinhu chinoda kuziva kuti zvimwe zvinhu zvinoshanda "kunze-kwebhokisi" (kesi yako) uye zvimwe hazvishande.kana ku imwe ye3 uye iyo CD ichashandiswa kugadzirisa Windows / Linux mess (yangu kesi). Sezvakataurwa nemumwe munhu, "ebu soda zvinhu" xD
Zvichava zvechimwe chinhu, handiti? xD
Nekuti ini ndauya kuzotora zvishoma zvekusafarira Ubuntu, uye pandinotsvaga matsva distros ini ndinowanzo kusefa iwo akatorwa kubva kuUbuntu.
Edito: Mushure mekutarisa ndinoda izvo zvandinoona zvishoma zvishoma. Isa uye zvese zvinoshanda. Sezvo izvi zviri zvandinofarira kwandiri zvakanyanya kushata, ini ndinoda kuve nechunhu kudzora pane yangu system, kunyangwe pamwe kune vabereki vangu iri hoot. Kubva paDebian neUbuntu: Dai aive Debian ndingadai ndisina matambudziko (kunze kwekunge mapakeji ayo anowanzo kuve echinyakare kuti ape kuwedzera kugadzikana) asi kana iwe ukandiudza Ubuntu ... Kubva pama skrini, zvinoita sekunge iyo "software maneja" inomira apt-kuwana haisi kana poindi yekuenzanisa neUbuntu, inoita kunge iri nani zvisingaperi, asi ini handifarire pfungwa yekuti yakavakirwa paUbuntu. Zviitiko zvangu zvakaipa naye, xD
Ndingatoshinga kutaura kuti idzi nhetembo dzinoita mashura.
Kuti Ubuntu naDebian vanotora zvakajairika mavhoti. Ko dai ndisina kuverenga chero chinhu nezve Mint, ini ndichaongorora nezvazvo. Zvinondishamisa kuti Arch iri munzvimbo yechitatu, ichive yakanyanya. Kunze kweArch, zvido zvevashandisi zvakandikwanira.